किन आउँछ पाद ? सम्बन्धि केहि रोचक तथ्यहरु यस्ता छन ! - jagritikhabar.com
किन आउँछ पाद ? सम्बन्धि केहि रोचक तथ्यहरु यस्ता छन !
नाक तथा मुखबाट हावा लिँदा तथा छाड्दा कसैलाई मतलब हुँदैन । तर जब कसैले मलद्वारबाट हावा छोड्दछ तब यसले नजिकका मानिसलाई दिक्क पार्दछ र हावा छोड्नेलाई लज्जित बनाउँदछ । कहिलेकाहीँ अझ तिखो आवाज र नमिठो गन्ध सहित आउने यस्तो ग्यास समस्याको विषय नै बन्दछ । तर विज्ञहरुका अनुसार यसरी ग्यास छाड्नुमा लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो त मानिसको पाचन प्रणाली स्वस्थ भएको संकेत हो ।
यस्ता छन् पादबारे केहि रोचक तथ्य
पेट भित्र रहेको अनावस्यक वायु मलद्वारबाट निष्कासन हुने एक दुर्गन्धित गन्धलाई पाद भनिन्छ । पाद्नु एक सामान्य प्राकृतिक कार्य हो जुन हरेक मान्छेमा हुन्छ । पेटको समस्या तथा ग्यास्ट्रिक भएको मान्छेलाई भने यसको ठुलो प्रभाब हुन्छ । आज हामीले त्यस्तै केहि पादको बारेमा खोज गरेर केहि तथ्य फेला परेको छौ ।
१. एउटा व्यक्तिले दिनमा औसत १४ पटक पाद्दछ भने जीवनभरमा ४०२००० पटक पाद्दछ ।२. नुहाएको बेला पादेको पाद बढी दुर्गन्धित हुन्छ । यसमा ५९% नाइट्रोज़न, २१% हाइड्रोज़न, ९% कार्बनडाइअक्साइड, ७% मिथेन, ३% अक्सिजन तथा १% अन्य तत्वहरु मिसिएको हुन्छ ।३. पादले हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्छ ।४. पाद रोक्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो, किनभने पादमा रहेको ग्यास मस्तिस्कमा गई टाउको दुख्ने समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्छ ।५. ब्ल्यु व्हेल माछाले पादेको पादको बुलबुल यति ठुलो हुन्छ कि उक्त फोका भित्र एउटा सिंगै घोडा अट्दछ ।६. पृथ्वीमा भएको सबै प्राणी मध्ये धमिराले धेरै पाद पाद्दछ ।
७. मध्य युगमा मानिसहरु आफ्नो पाद एउटा खालि भाँडामा पादेर भाँडालाई बन्द गरेर राख्थे, पछी त्यो पादलाई सुघ्यो हने आयु बढ्छ भन्ने अन्दबिश्वास थियो ।८. अन्तरिक्षमा जाने अन्तरिक्षयात्रीहरुले पाद्न सक्दैनन्, किनभने अन्तरिक्षमा अन्तारिक्षयात्रिहरुको पेटमा पानि र ग्यासलाई अलग अलग गर्नको लागि गुरुत्वाकर्षण हुदैन ।९. सिमिको तरकारी खाएको दिनमा पाद सबैभन्दा धेरै पटक आउछ ।१०. कुकुरले आफ्नो पाद्लाई देख्न सक्छ ।११.पाद पादने बेलामा यसको तापक्रम ९८.६ डिग्री फरेनहाइट हुन्छ । पाद एक प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले पादेको बेला आगो बाले पाद बल्दछ । यस्तो कार्यले कहिले कहीं तपाइलाई चोट पनि पुराउन सक्छ ।
१२. तपाइले पादेको पादको हावाले बलिरहेको मैनबत्ती सजिलैसंग निभाउन सक्छ, किनभने यसको स्पिड १० फिट प्रति सेकेन्ड हुन्छ ।१३. पाद्लाई बासनादार बनाउनको लागी दबाई पनि निर्माण भएको छ, फादर क्रिसमस भन्ने औषधि खानु भयो भने तपाइले पादेको पादमा चकलेट र गुलाबको बास्ना आउने गर्छ ।१४. नाइट्रोजन र कार्बनडाइअक्साइड बढी भएको पादमा गन्ध धेरै आउदैन तर त्यस्ता पादहरुको आवाज ठुलो हुन्छ ।१६. सन् २००९ मा अमेरिकाको फ्लोरिडामा १२ वर्षीय बिध्यार्थिलाई धेरै पादेको कारण गिरफ्तार गरिएको थियो ।
१७. कहिले काँही पाद आएको हाम्रो मलद्वारको नशाले पाद र दिसा बीच अन्तर छुट्याउन नसके पादेको बेला थोरै दिसा पनि पाद संगै आउदछ ।१८. हाम्रो पादमा हुने १% हाइड्रोजन सल्फाईडले नै पादलाई दुर्गन्धित बनाउदछ ।१९. यदि कुनै व्यक्तिले ६ वर्ष ९ महिनासम्म लगातार पादिरहंछ भने त्यो पादको इनर्जी एउटा एटम बम जतिको हुन्छ ।२०. चिम्पान्जी धेरै ठुलो आवाज निकालेर पाद्दछ ।२१. तपाइलाई यदी पादै पादले भरिएको च्याम्बरमा थुनेर राखियो भने पनि उक्त पादको कारण तपाइको मृत्यु भने हुदैन ।२२. हवाईयात्रामा मानिसहरु धेरै पाद्दछ्न, पाद्को दुर्गन्ध कम गर्नको लागी चारकोल फिल्टरको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।२३. मानिस मरेको ३ घण्टापछी पनि पाद भने आइरहेको हुन्छ ।२४. पृथ्वीमा रहेको सबै मानिसहरुले एक सालमा करिब 17,000,000,000,000,000 पटक पाद्दछ ।